Soo dejisan Uber 3.131.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Uber
Uber – software ah si aad u raadiso iyo dalban adeeg darawalka gaarka ah. software The go’aamisa wadataa of user a, bandhigayaa dhammaan baabuurta ugu dhow oo xisaabinaya wakhtiga saxda ah ee la yimaado gaari meesha uu user. Uber kuu ogolaanaya in aad si aad u dalbato raaxada ama baabuur premium. software The dhigaan iyo bandhigayaa wadada for darawalka ka cinwaanka cayimay ee ku biiray Ahaado. Uber u saamaxaaya in ay aragto canshuur iyo qiimaha saxda ah ee safarka ah. software soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan sar darawalka. Uber bixisa lacagta listicmaalka ah, kaas oo la bixiyo kaarka deynta ku lifaaqan xisaabta.
Imaanshiyaha deg deg ah oo gaariga ku amray
Xisaabinta qiimaha saxda ah ee safarka
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan darawalka
Soo dejisan Uber
Faallo ku saabsan Uber
Uber Xirfadaha la xiriira